Sawirro xiriirka caalamiga ee Soomaaliya - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Sawirro xiriirka caalamiga ee Soomaaliya
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 3 Febraayo, 2013, 21:47 GMT 00:47 SGA
Madaxweynaha ayaa kula kulmay dhowr madax ee Midowga Yurub magaalada Brussels ee dalka Belgium. Dadka uu la kulmay waxaa ka mid gudoomiyaga Guddiga Midowga Yurub Jose Manuel Barroso.
Madaxweynaha ayaa hadal ka jeediyay Golaha Midowga Yurub xaruntiisa shirka jaraa'id ee Brussels. Waxa ay isla qabteen Madaxweynaha Golaha Yurub Herman Van Rompuy.
Madaxweynaha iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Belgium Didier Reynders.
Wakiilo ka kala socda caalamka, Bangiga Adduunka, dalalka ugu dhaqaalaha wayn adduunka ee Maraykanka, Britain, Midowga Yurub, Japan, Italy, Turkey, Denmark, Norway, Sweden iyo Findland oo booqday Muqdisho.
Safiiro ka kala socda caalamka oo yimid Soomaaliya si loo soo celiyo xiriirka caalamiga ah ee ay Soomaaliya la leedahay caalamka.
Safiiro ka socda dalalka Afrika ayaa ka mid ahaa dalalka xiriirka la samaynaya dowladda cusub ee Soomaaliya.
Caasha Xaaji Cilmi oo abaalmarin caalami ah la siiyay08:05
Maktabadda Qaranka oo dib loo dhisayo07:23
Halkii kilomitir ee Islii waxaa ku yaalla dhowr iyo toban maqaayadood04:44
Soddon iyo lix ku dhaawacantay Nairobi02:43
Sawirro: Garoobna maaha raggoodana ma hayaan(none)
Sawirro aaska Mandela(none)